Nolosha La Soo Noqday, Kaniisadda Adduunka Ee Switzerland Switzerland (WKG)
Waa maxay macnaheedu inuu noqdo qof raaca Ciise? Waa maxay macnaha in lala wadaago nolosha madax furashada ah ee Ilaah ina siiyay Ciise xagga Ruuxa Quduuska ah? Waxay ka dhigan tahay ku noolaanshaha nolol run ah oo Masiixi ah oo dhab ah iyada oo loo marayo tusaalaheena, u adeegid si iskiis ah u noolaanshaha aadanaha kale. Rasuul Bawlos wuxuu si dheer u sii socday: “Miyaanaydin ogayn jidhku inuu yahay macbudka Ruuxa Quduuska ah ee idinku dhex jira, oo aad Ilaah ka tihiin, oo aydnaan lahayn naftaada? Maxaa yeelay, aad ayaa loo soo iibsaday; Sidaa darteed Ilaah wuxuu ku ammaanayaa jidhkaaga » (1 Korintos 6,19: 20).
Ciise wuxuu inaga soo furtay shaqadiisii ​​badbaadada oo wuxuu noo qaatay hanti ahaan. Markuu xaqiiqadan runtii ku xaqiijiyey iimaanka Ciise Masiix, Bawlos wuxuu nagu waaniyey inaan ku noolaano runtaan, nolosha cusub ee laga xoreeyay dembiga. Rasuul Butros wuxuu ka digay inay jiri doonaan macallimiin been abuur ah: "Si qarsoodi ah, waxay ku wareegi doonaan baritaannada diineed ee u horseedda baabi'inta, waxayna sidaas oo kale u diidi doonaan sayidkii iyo taliyihii iyagu hanti ku iibsaday." (2 Butros 2,1). Nasiib wanaagse, macallimiintani beenta ahi gabi ahaanba ma laha awood ay ku beddelaan xaqiiqada cidda Ciise yahay iyo wixii uu nagu sameeyey. «Ciise Masiix naftiisa ayaa nafteenna inoo siiyay inuu inaga badbaadiyo xaqdarrada oo dhan, oo uu naftiisa nadiifiyo dad hanti u rajeeya wanaagga wanaagsan» (Tiitos 2,14). Daahirintan, oo xagga Ciise ka timaada adeegga joogtada ah ee Ruuxa Quduuska ah, ayaa awood noo siisa inaan ku noolaano nolosha madax furashada ah ee Ciise Masiix.
Butros wuxuu sharraxayaa: "Waad ogtihiin inaadan laydinka soo furan lacag lacag ama dahab ah oo laga beddelay wax aan waxtar lahayn oo xagga aabayaasha ah, laakiin lagu adeego dhiigga Masiix qaaliga ah oo ah idlaan aan waxba galabsan oo buunbuunin leh" (1 Butros 1,18: 19).
Aqoontaani waxay noo suurtogelinaysaa inaan si buuxda u fahanno muhiimadda u ekaanta Ciise. Wiilkii daa'imka ahaa ee Eebbe wuxuu noogu yimid qaab bini aadam ah ka dib markii uu aqbalay dabeecaddayadii aadamiga ahayd, kaas oo uu markaa isu beddelay oo uu hadda nala wadaago xagga Ruuxa. Wuxuu awood inoo siinayaa inaan runtii ku noolaano nolosha madax furashada ah.
Dib-u-heshiisiinta xagga Ciise waa xudunta qorshaha Ilaah ee aadanaha. Dhalashada ama "in laga dhasho korka" waa shaqadii furashada ee Ciise qabtay oo taas dhexdeeda ah oo uu inaoo shaqeeyey Ruuxa Quduuska ah.
Laakiin markii roonaanta iyo jacaylka dadka Badbaadiyeheenna ahi ay muuqdeen, wuxuu inagu farxay, mana aha xagga shuqullada xaqnimada aannu ku samayn lahayn xaqnimo, laakiinse naxariistiisa aawadeed, markuu maydhan yahay dhalashada dhalashada iyo cusboonaysiinta Ruuxa Quduuska ah, oo uu isagu ka adkaaday. oo wuxuu aad inoogu shubay Badbaadiyeheenna Ciise Masiix, si nimcadiisa loo dhaxlo markaynu rajada ku helno nolosha weligeed ah (Tiitos 3,4-7).
Iyada oo loo marayo ruuxda dhaxalka ah, waxaan awoodnaa inaan kula wadaagno bini-aadamka Ciise. Taas macnaheedu waa inaan ku wadaagno wiilkiisa iyo wehelnimada iyo iskaashiga Aabbaha ku dhex maro Ruuxa Quduuska ah. Aabayaashii kaniisaddii hore ayaa sidan u dhigay: "Ciise, oo dabiicadiisu ahayd Wiilka Ilaah, wuxuu noqday Wiilka Aadanaha, inagoo innaguna, sida dabiiciga ah ina nahay binu-aadmiga dabiiciga ah, aan nimco ku noqonno carruurta Ilaah".
Haddii aan ku wareejinno shaqada Ciise iyo Ruuxa Quduuska ah oo aan nafteenna u dhiibno, waxaynu ku dhalan doonnaa nolol cusub oo horay loogu sii shaqeeyey bini-aadamka Ciise. Dhalashada dib-u-soo-celinta nooguma soo bandhigeyso oo keliya qoyskeenna xagga Ilaah xagga dareenka sharciga ah, laakiin dib-u-dhashaheena ruuxiga ah waxaan wadaagnaa Masiixa biniaadamka. Waxaan tan ku sameyneynaa adeegga socda ee Ruuxa Quduuska ah. Bawlos wuxuu u qornaa sidan: «Sidaa darteed: haddii qof ku jiro Masiixa, waa abuur cusub; kii hore wuu dhammaaday, oo bal eeg, wax cusub ayaa noqday » (2 Korintos 5,17).
Waxaan ku cusub nahay Masiixa waxaana naloo siiyay aqoonsi cusub. Markii aan helno oo aan ka jawaabno adeegga ruuxa ku jira, waxaynu ka dhashay xagga sare. Sidaas baynu ku noqonnay carruurtii Ilaah ee ku wada qaybsada binu-aadmiga Masiixa ee Ruuxa Quduuska ah. Waa kan sida Yooxanaa ugu dhex qoray injiilkiisa: "Laakiin kuwa aqbalay isaga oo rumeeyey isaga, wuxuu siiyey amar ay ku noqdaan carruurta Ilaah. Iyagu sidaas ma ay noqonin maxaa yeelay waxay ka tirsan yihiin dad la soo doortay, xitaa ma aha tan iyo jiilka aadanaha iyo dhalashada. Ilaah iyaga siiyey noloshaan cusub oo keliya » (Yooxanaa 1,12: 13 rajo u leh dhammaan).
Markii aan ka dhashay dhalashada sare oo loo aqbalo sida carruurta Ilaah, waxaan ku noolaan karnaa xiriirka cusub, xiriir dib-u-heshiisiin leh oo lala yeesho Ilaah, nolosha madaxfurashada leh ee Masiixa. Waxa Ciise inoogu sameeyey siduu yahay Wiilka Ilaah iyo Wiilka Aadanaha ayaa inagu dhex shaqeeya, sidaa darteed nimcooyinka ayaan ku noqonnay carruurta Ilaah ee aan ku sugan nahay. Ilaah waa kan dhigaya rumaystayaasha cilaaqaadka cusboonaysiinta ee la leh naftooda - cilaaqaad ina saameeya asalka jiritaankeenna. Tani waa sida Bawlos u diyaariyey runta runti la yaab leh: «Waayo, ma aydin helin ruuxa addoonsiga oo aad mar kale ka cabsan doontid; Laakiin waxaad heshay ruux carruurnimada ah oo aan ugu yeedhno: Aabe, aabbe gacaliye! Oo Ruuxa qudhiisu wuu markhaati furaa oo wuxuu ruuxeenna u sheegaa inaynu innagu nahay carruurta Ilaah. (Rooma 8,15-16).
Tani waa runta, xaqiiqada nolosha la soo furtay. Aynu dabaaldegno qorshihiisa ammaanta leh ee badbaadada oo aan farxad farxad leh ugu ammaano Ilaahayoga ah, Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.